कस्तो रहला अबको शेयर बजार?
काठमाडौं, असार २८ : यो साता नेप्से परिसूचक १२६० दशमलव ४७ विन्दुमा खुलेको थियो भने १२६३ दशमलव ८२ को ‘इन्ट्राडे’ उच्च विन्दु बनाएको थियो।
त्यसैगरी, ‘इन्ट्राडे’ न्यून विन्दु १२४४ दशमलव ३६ थियो भने बजार १२४८ दशमलव ५३ विन्दुमा बन्द भएको थियो। यो अघिल्लो साताभन्दा ० दशमलव ९५ प्रतिशतको गिरावट हो। यो साता पाँच कारोबार दिनमा २ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख बराबर रकमको शेयर किनबेच भएको छ।
विगत एक वर्षदेखि बजारको उतारचढाव कस्तो रह्यो भनि हेर्नलाई चित्र नं. १ मा नेप्सेको साप्ताहिक मैनबत्तीहरुलाई प्रयोग गरिएको छ। अघिल्लो साताको विश्लेषणको निष्कर्ष अनुसार तीन सातादेखि यता बजार प्रवृत्तिहीन रहेको देखिन्छ, यसले बजारमा लगानीकर्ताहरु अन्योल अवस्थामा रहेको संकेत गर्दछ।
चित्र नं.२, दैनिक मैनबत्ती प्रवृत्तिहरुले यो साता बजारमा उतारचढाव कम रहेको र लगानीकर्ताहरुको सहभागिता सामान्य रहेको देखिन्छ। यो साता पनि १४ दिनको एक्सपोनेन्सियल मुभिङ्ग एभरेज (ईएमए) प्रतिरोधको रुपमा देखिएको छ।
रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स (आरएसआई) ४१ दशमलव १० अंकमा रहेको छ। यसको प्रवृत्तिले बजारमा क्रेताको चाप सकारात्मक हुन थालेको संकेत गरेको छ। एमएसीडीको प्रवृत्तिले बजार नकारात्मक क्षेत्रमा रहेपनि बजारमा क्रेताको चाप प्रारम्भिक रुपमा रहेको संकेत गरेको छ।
निष्कर्ष : हालसम्म नेप्सेको प्रवृत्ति र सूचकले मिश्रित संकेत गरेको छ। हाल बजार टेवा क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ। यो अवस्थामा खरिदकर्ताहरु बजारमा प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न।
समग्रमा हेर्दा यदि बजार १२७३ भन्दा माथि स्थिर रहेमा बजार केही सकारात्मक हुन सक्ने र अर्को तत्कालीन मुख्य प्रतिरोध १२९० देखि १३०० को क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ। त्यस्तै, यदि बजार १२३७ भन्दा तल रहेमा बजार अझ केही सच्चिन सक्ने देखिन्छ।
Published Date: Saturday, 13th July 16:47:43 PM